December 2012 | မိုးသကျဦးလှငျ
Posted by မိုးသက် at 4:45 PM4comments Read more
2012 ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ခြင်း... (အစ်မတော်ပစ်ပစ်ရဲ့ တဂ်ပို့စ်)
တဂ်ပို့စ်တွေမရေးတာတော်တော်ကြာလှပါပြီ... ။ ရေးစရာကလည်း လွယ်လင့်တကူ မြန်ဆန်ထိရောက်
ရလဒ်တွေချက်ချင်းတွေ့ပြီးလူတိုင်းမြင်တဲ့ Facebook မှာပဲ စတေးတပ်စ်တင်ဖြစ်နေတော့ Blog ကိုမေ့နေ
ကြတယ်..။ ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ခုနှစ်သက္ကရာဇ် အနည်းငယ်ထဲမှာ..၂၀၁၂က တစ်မူထူးတယ်.။
အဲဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်.။ ရက်စွဲ အချိန် အတိအကျပေါ့.။
နေ့တိုင်း ဒိုင်ယာရီရေးသာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကျင့်လေးကြောင့်ဖြစ်မှာပေါ့.။
တွေးစရာတွေစီကြည့်ရင်.ဒီနှစ်ထဲမှာ ဆွေးစရာတွေလည်း များခဲ့တာကို တွေ့မိတယ်.။ကကျွန်တော်
တို့ နှစ်ဦးပိုင်းကို သွားကြရအောင်.။ ဒိုင်ယာရီထဲမှာ စတားပြထားတဲ့နေ့လေးတွေအစီအရီတွေ့မိရဲ့ အဲဒီ
နေ့တွေထဲကမှ. ထူးခြားတဲ့နေ့လေးတွေကို ရင်ဖွင့်ပြောပြလို့.. တဂ်ပို့စ်လေးကို အစပျိုးပါ့မယ်.။
အခုမော်စကိုကိုပါလာတဲ့ ဒိုင်ယာရီလေးရဲ့ အစက ၁၄-၈-၂၀၁၁ ပေါ့.။ ဒီနှစ်အစရဲ့ပထမဆုံးထူးခြား
တဲ့ကာလတွေက.တစ်ယောက်သော သူနဲ့ ပတ်သတ်ခဲ့တာတွေများတယ်.။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်လည်းမ
ပြောလိုတော့တဲ့ကာလတွေပေါ့.။ အဲဒီထက်ထူးခြားတာက ၁၀-၁၂-၂၀၁၁ မှာအစပြုခဲ့တဲ့ ဟောဒီ မေမြို့မိုး
ဆိုတဲ့နာမည်လေး အားလုံးရဲ့ဖေးမမှုနဲ့ အစပျိုးလာတာပါပဲ.။ (နောက်တစ်ကြိမ်စိတ်ထဲက ကျေးဇူးမနည်း
မနောကြီးတင်မိပြန်ပြီ.။) နှစ်စပိုင်းမှာတော့ ကျွန်တော့် အတွင်းသဏ္ဍာန်ကလည်း ရာသီဥတုလို သာယာ
လိုက် ၊ တိမ်ထူလိုက်၊ နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာလိုက်ပါပဲလေ.။
၉-၃-၂၀၁၂ ကတော့ ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံးနေ့တစ်နေ့ပေါ့. ။ စိမ်းလန်းမြေပရဟိတအသင်း
မှာ စာရင်းပေးခဲ့တဲ့နေ့ ၊ အသင်းဝင်ဖောင်ဖြည့်ပြီးအသင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေ့ပေါ့.။
၁၂-၃-၂၀၁၂ လေးက ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူး.။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတာပါ.။ ဘာလို့
လဲသိလား.။ အဲဒီနေ့မှာ အစ်မမဒမ်ကိုးနဲ့ အဖွဲ့ကျသွားတာလေ.။သူက အစ်မမိုးငွေ့နာမည်ကို မမိုးငွပ်လို့ဖတ်
ပြီး စတေးတပ်စ်တင်တာ.။ ကျွန်တော်လည်းဝင်ပြောရင်းနဲ့ ကျောင်းကိုနောက်ကျပါလေရော.။ ကောင်းပ မ
မိုးငွပ်.။ အဲဒီနေ့က စပြီး အစ်မမဒိုးကြီးနဲ့ဖဘမှာသောင်းကျန်းတော့တာပဲ..:)
၁၄-၃-၂၀၁၂ ရော အားလုံးမှတ်မိကြလား.။ ထူးခြားတဲ့နေ့ပါပဲ..။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် TV မှာစကား
ပြောတဲ့နေ့၊မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရေပိုင်နက်အဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့နေ့၊ ၀န်ထမ်းတွေလစာတိုးတဲ့နေ့၊ ၂သိန်း
တန်ဖုန်းတွေထုတ်ပေးတဲ့နေ့၊ (ထူးထူးခြားခြား)ကျွန်တော်တို့ ပရော်ဖက်ဆာကြီးမလာတဲ့နေ့ဗျ..။
သင်္ကြန်တွင်းကာလတွေက ထူးထူးခြားခြားပျော်ခဲ့တာမရှိဘူးခင်ဗျ.။ ခန်းမကြီးထဲမှာရေတွေလောင်းပြီး
သာပျော်နေရတယ်.။ ပြတင်းပေါက်မှန်ကကြည့်လိုက်ရင် အပြင်မှာရေခဲတွေနဲ့. >.<..။
၂၄-၄-၂၀၁၂ကတော့မပစ်နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့အောင်ပွဲတစ်ဝက်ခံတဲ့နေ့.ဟီးဟီး.Chelsea FC 2-2 Barcelona
ပါ.။ အိမ်ကွင်းမှာ 1-0နဲ့နိုင်ထားတာ. ။ပျော်ထှာ..။ နော့ မပစ်.။
၂-၅-၂၀၁၂ က ချစ်လှစွာသော အစ်မ မကန်ဒီ့ မွေးနေ့..အဲ့နေ့က ညကချီးယားလုပ်ပြီး ပတ္တနာလေးနည်း
နည်းတက်သေးတယ်.။ အစ်မမွေးနေ့မို့လို့ ပျော်ရွှင်ကြောင်းအထိမ်းအမှတ်ပေ့ါလေ.. ။ ချီးယားလုပ်ကြတာ.။
(ဘာမှလည်းဆိုင်ဘူးနော်..ခုတော့လည်းသောက်တော့ပါဝူး)။ ၃ ရက်နေ့ကတော့ ဘယ်သူ့မွေးနေ့လည်း
၂၁-၁၂ လတော့မသိဘူးခင်ဗျ.။ ၅ရက် ၅ လပိုင်းမှာတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာလေးတစ်ခု ပျက်စီး
သွားတယ်.။ အဲဒီနေ့က ဒိုင်ယာရီက စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာလောက်ရှိတာလဲပါမှာပေါ့။ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ ကိုယ်
ဆိုပေမယ့်. ပြန်မတွေးချင်လောက်အောင်ဖြစ်နေလို့ ပြန်မပြောပါရစေနဲ့တော့နော်.။
၇ ရက်နေ့မှာ..ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် ပြန်စ ဖို့ပြင်တဲ့နေပေါ့.။ ကျွန်တော်က သွေးထွက်လွယ်ပေမယ့်
အနာကျတ်မြန်ပါတယ်လို့ ပြောဖူးတယ်ထင်တယ်နော်.။ အဲဒီနေ့ကလေ လောကကြီးနဲ့ ဘ၀တစ်ခုလုံးကို
မေ့ ထားပြီး စကိတ်စီးလို့ အဝေးကြီးကို သွားခဲ့တယ်.။ဘာကိုမှ မစဉ်းစားပဲနဲ့လေ. ။ ညရောက်တော့တစ်ည
လုံးအရက်သောက်ဖြစ်တယ်.။ ဒါပေမယ့် ထူးဆန်းစွာပဲ မမူးခဲ့ဘူး.။(အဲဒီနေ့ပြီးတော့ အစ်မပစ်ပစ်နဲ့စကား
ပြောဖြစ်တယ်.။ စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့ အစ်မကို ပြန်ပြီးတော့ အားပေးဖြစ်ပါတယ်.။ အခုတော့ အေးဆေး
၂၂-၆-၂-၁၂ ကတော့ထူးတယ်.။ အဲဒီပေ့ခ်ျကိုပါဒေါင်းလုပ်ချပြီးသိမ်းထားတယ်.။ ကြံကြံဖန်ဖန် ကျွန်တော်
က Myanmarexpress ဆိုက်ရဲ့ အက်ဒမင်ပါဆိုလို့ အစ်မတော် မဒိုးကြီးတို့ အရပ်ကူပါ လူဝိုင်းပါလုပ်ပြီး
We Fight We rich ဆိုက်ထိရောက်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ပုံကို ပြန်ဖျက်ခိုင်းရတယ်.။ >.< ။ အဲဒီလိုပါပဲ.။
လောကကြီးမှာ မပုပ်ပဲလည်း ပေါ်ရတယ် ၊ မဟုတ်ပဲလည်းကျော်ရတယ်.။
၄-၇-၂၀၁၂ ရက်နေ့က အီတလီမလေးတွေနဲ့တွဲကတဲ့နေ့ မှတ်မိတယ်ဟုတ်.။ အင်္ဂလိပ်လိုပြောချင်လွန်း
တာ မပြောခဲ့ရသမျှ ရွှန်းရွှန်းဝေအောင်ပြောပစ်တဲ့နေ့.။ကျွန်တော်က ရုရှားမှာသာနေတာ. အင်္ဂလိပ်လို
အင်မတန်ပြောချင်တဲ့ ငတိပါ.။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောကောင်းလွန်းလို့မဟုတ်ပါဘူး.။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောရ
တာကို သဘောကို ကျတာပါ.။ရုရှားစကားတောင် အဲဒီလောက် မပြောတတ်ပါဘူး.။
၁၇-၇-၂၀၁၂ ရက်နေ့က မော်စကိုကနေ ဒိုကာပရုသနီအဆောင်ကိုပြောင်းလာတဲ့နေ့.။
၂၀-၇-၂၀၁၂ က ကျွန်တော့်မွေးနေ့ အမေနဲ့အဖေကို ကန်တော့ပါတယ်.။ facebook မှာ Birthday
wishes တွေက. ၁၃၅ တောင်ရတာ အရမ်းပျော်မိပါတယ်.
၉ ရက်နေ့က နေ ၂၃ ရက်နေ့ထိက တောမှာသွားပျော်ခဲ့တဲ့ကာလပါ. ။ ကျွန်တော်ဘ၀မှာနောက်ထပ်
နောက်ပိုင်းရက်တွေက သိပ်ပြီးထူးခြားတာသိပ်မတွေ့ရဘူ။ ဒါပေမယ့် နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက် မှာ.ကျွန်တော့်
ဘ၀ကို နောက်ထပ် မောင်းနှင်မယ့် ကပ္ပတိန်တစ်ဦး ထပ်မံခန့်အပ်လိုက်တဲ့နေ့ပေါ့.။
ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ မပစ်ပြောသလိုပဲ. ပစ္စည်းကြီးကြီးမားမားဆိုလို့ အလက်ထရစ်ဂစ်တာတစ်လုံးပဲ အဖတ်
တင်တယ်.။ အသိပညာကတော့ အများကြီးရခဲ့သလို ကျွန်တော့်ဘလော့လေး ပုံပေါ်လာခဲ့တယ်.။ လူ့လော
ကရဲ့ ပရိယာယ်တွေကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာသလို ပါးနပ်မှုလည်းရှိလာတယ်.။ အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ
မောင်နှမတွေရခဲ့တယ်.။ ဒီနှစ်ကျွန်တော် လှူဖြစ်တဲ့ငွေက ဒေါ်လာ တစ်ရာကျော်လေးပဲရှိပါတယ်..။ နောက်
နှစ်တွေမှာ ဒီထက်ပိုလှူနိုင်အောင် ကြိုးစားဦးမယ်.။ အတိတ်တွေကို ထားခဲ့ပါ. ။ သင်ခန်းစာတွေကိုမှတ်
သားသွားပါ.၊ အနာဂါတ်အတွက် ပစ္စုပ္ပာန်မှာ ပြင်ဆင်ကြရအောင်ပါနော်.။ အတိတ်တွေကအိပ်မက်ဆိုးတွေ
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့.။ ဒါပေမယ့် ဒီအချိန် ကောင်းနေတာတွေရဲ့ အခြေခံဆိုတာ ငြင်းလို့မှ မရပါပဲနော်.။
ဟိုးနေ့က စာလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ရတယ်.။ သဘောကျလို့ပါ.။ ကျွန်တော်တို့ ဖဘ မှာစာတွေရေး ဘလော့
လေးတွေရေးပေမယ့် ကျွန်တော်အပါအ၀င် ကိုရင်ဆူး၊ ကိုအလင်းသစ် ၊ကိုမောင်မောင်တို့အားလုံးက တာ
လေးတွေက မီးလုံးစိမ်းလေးတွေ မြင်ချင်လို့တောင်ထပ်မြင်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး.။ တစ်ခုပဲတောင်းဆိုချင်
ပါတယ်.။ အဲဒီအချိန်ကျရင်. ဒီမိသားစုလေးထဲမှာ ပျော်ရွှင်စီးမျောခဲ့ဖူးတဲ့ မိုးသက်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်လေးရဲ့
ပိုင်ရှင်. ကျွန်တော့်ကို..မေ့သွားရင်တောင် ဘ၀နဲ့ဆန္ဒထပ်တူကျခဲ့ဖူးတဲ့အချိန်မှာ ဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းလေးကို
ဘ၀တစ်ခု ထင်မှတ်ဖူးတယ်ဆိုတာ...အားလုံးအသိအမှတ်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်.. ကျွန်တော်ဒီတဂ်ပို့စ်လေးကို
Posted by မိုးသက် at 5:07 PM 11 comments Read more
MyStart by Incredibar ဆိုတဲ့ကောင်လေးကြောင့် စိတ်မညစ်ရစေဖို့...
ကျွန်တော်တို့ VZO အပါအ၀င် Downloader မှာပါလာတဲ့
My Start ဆိုတဲ့ စိတ်ရှုပ်စရာကောင်လေးတစ်ကောင်ရှိပါတယ်.။
နံပတ်(၁) - firefox အပါအ၀င် သုံးနေတဲ့ Browser အားလုံး ရဲ့ Home Pages တွေအားလုံးက My Start Search Engine ဖြစ်သွားပါတယ်.။
နံပတ်(၂) - အဲဒီကောင်က Default Browserဖြစ်သွားတဲ့အပြင် အသစ်ဖွင့်သမျှ Tab တွေအားလုံးကလည်း My Start ဖြစ်ကုန်ပါတယ်.။
နံပတ်(၃) - ဘရောက်ဇာတွေမှာ My Start tool bars တွေပေါ်လာပါတယ်.။
အန်တီဗိုင်းရပ်စ်တော်တော်များများက သူ့ကို လက်မခံပါဘူး.။ ဆိုလိုတာက ဒီကောင်လေးကလည်း
Malware အနွယ်ဝင် ပါပဲ. ။ Virus မဟုတ်ပေမယ့်.။ Browser Hijacker တစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်
ကျွန်တော်က Chrome မသုံးပါဘူး.။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ IDM ရဲ့ Addon က မီးမြေခွေးအတွက်မရှိလို့ပါ.။ဒါပေမယ့် ခရုမ်းအတွက်လည်းရေးပေးပါမယ်.။
အဲဒါ စောစောက VZO တင်ပါတယ်.။ ခုခေတ်အလကားရတဲ့ software တွေတော်တော်များများကို တင်တဲ့
အခါမှာ. သူတို့ ကုမ္ပဏီစာမျက်နှာကို Homepage ထားဖို့နဲ့. tool bars တွေ ထည့်ပေးဖို့ အမှန်ခြစ်ခိုင်းလေ့
ရှိပါတယ်.။ ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်အချိ်န်တင်တင် အဲ့ဒါတွေကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပြီးမှ တင်လေ့ရှိပါတယ်.။
Tools bar တွေများလေလေ browser ကနှေးကွေးလေလေပါပဲ.။ တစ်ခါတစ်လေ လက်တစ်လုံးခြားလုပ်ပြီး
အဲဒီအမှန်ခြစ်ခြစ်တဲ့နေရာလေးကို သေးသေးလေးလုပ်ထားတာမျိုး. မှိန်ထားတာမျိုးရှိပါသေးတယ်.။ကဲ
ထားပါတော့.။ ခုနက VZO တင်ပါတယ်.။တင်တော့ ကျွန်တော်လည်း ခါတိုင်း သေချာကြည့်ပါလျက်နဲ့
ဘယ်တုန်းက ဘယ်လို မျက်စိမှားပြီး ကျော်သွားလဲမသိပါဘူးတင်ပြီးတဲ့အခါ ကြည့်လိုက်တော့လက်စွဲတော်
မီးမြေခွေးမှာ အမြင်ကတ်စရာကောင်းတဲ့ Tools ဘားတစ်ခုရောက်နေပါတယ်.။
ဒီလိုပုံလေးပါ..(ပုံကတော့ Googling လုပ်ပြီးရှာထားတာနော် ကျွန်တော့် ဆီမှာ အဲဒီလောက်မရှုပ်ဘူး.)
ကျွန်တော် အနီနဲ့ကွင်းပြထားပါတယ်.။ ဒီဥစ္စာမှမဟုတ်ပါဘူး.။ အဲဒီလို တစ်ခြား Tool bars တွေရှိပါသေး
တယ်.။ ဘယ်ကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် လေးတာပါပဲ.။
အဲ့လိုဖြစ်နေပြီဆိုရင် အရင်ဆုံး. Windows key + R ကိုနှိပ်ပါ..။ ပြီးရင် appwiz.cpl လို့ရိုက်ပြီး
Mysearch ဒါမှမဟုတ်.Incredibar နဲ့ပတ်သတ်တာမှန်သမျှ အကုန် Uninstall လုပ်ပါ.။ ပြီးရင်..
မော်ဇီလာမှာ.. Home Page ကို မိမိယခင်က ထားတဲ့ဥစ္စာဒါမှမဟုတ် သဘောကျတဲ့ဟာ ပြန်ပြောင်းပါ.။
ကျွန်တော်ကတော့ Google ပဲထားပါတယ်.။ အားရင် ရှာရတာလွယ်ပါတယ်.။Home Page ထားရတာ
လည်းလွယ်ပါတယ်.။ အပေါ်က Adress Bar မှာ.။ Google လို့ရိုက် Ctrl+Enter နှိပ် အာ့ဆို.
http://www.google.com ပေါ်လာပြီ.။ အဲဒီအခါ အဲဒီ Tab လေးကို Drag ဆွဲပြီး ညာဖက်က Close
သင်္ကေတ ကြတ်ခြေခတ်လေးအောက်လောက်က အိမ်ပုံလေးထဲကို ဆွဲထည့်လိုက်ရင် ဒီဥစ္စာကို Home page ထားမှာလားဆိုတဲ့ Dialog box တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်. ။အဲဒီအခါ Yes ပေးလိုက်ပေါ့. အဲဒါဆို
အဲဒါပြီးရင်. Firefox ရဲ့ Menu bar ကနေ Tools/Add-ons/Extensions/ ကိုသွားပါ.။ ပြီးရင် Mysearch ဒါမှမဟုတ်.Incredibar နဲ့ပတ်သတ်တာမှန်သမျှအကုန် Remove လုပ်ပါ.။ Firefox ကို Restart ချပါ.။၏
ပြန်ပွင့်လာတဲ့အခါ Home Page ပြန်ပြောင်းနေတာတွေ့ရမှာပါ.။
ပြီးရင် အဲဒီ Adress bar မှာပဲ.။ about:config လိုရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ.။ အောက်ပုံလိုပါ..။
အဲဒီအခါကျရင်.. အဲဒီပေါ်လာတဲ့ I'll be careful, I promise! ကိုနှိပ်ပါ.။နှိပ်ပြီးရင် အောက်မှာ
စာကြောင်းတွေ အများကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.။ အဲဒီအခါကျရင် အပေါ်က Search Box မှာ Mystart
လို့ရိုက်ရှာပါ.။ အဲဒီမှာ ထွက်လာတဲ့စာကြောင်းအနည်းငယ်ရှိပါလိမ့်မယ်.။ တစ်ကြောင်းချင်းစီပေါ်မှာ
Right နှိပ်ပြီး Reset ကိုရွေးပေးရုံပါပဲ..။
Chrome အတွက်ကတော့ လွယ်ပါတယ်.။
Chrome ရဲ့ညာဖက်အပေါ်ထောင့်က ဂွပုံလေးကို နှိပ် ပြီး Toos/Extensions ကိုသွားပါ.။
အဲဒါပြီးတဲ့အခါ Incredibar Addons ကို အမှိုက်ပုံးပုံလေးနှိပ်ပြီးဖျက်ပစ်လိုက်ပါမယ်.။
အဲဒါပြီးရင် Settings/manage search engines..ကိုသွားပါ.။
ပြီးရင် Mystart Search Engine ကို အမှားခြစ်နှိပ်ပြီး ဖျက်လိုက်ပါ.။ Google ကို Default ထားလိုက်
ဒါဆိုရင် Chrome အတွက်လည်းရပါပြီ.။
အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ.။ ပေါ့ပါးသွက်လက်တဲ့ Browser တွေနဲ့ဖလန်းဖလန်းထနိုင်ကြပါစေ.။
Posted by မိုးသက် at 6:13 PM5comments Read more
Posted by မိုးသက် at 12:24 PM 23 comments Read more
Posted by မိုးသက် at 12:40 PM 8 comments Read more